Ị Pụrụ Lee Ìhè? Naanị na Right Lens! - 2019 họpụtara Gosi News site Broadcast Naa. Official mkpọsa ozi nke họpụtara Gosi, Producer nke họpụtara Gosi LIVE
Home » content Creation » Ị Pụrụ Lee Ìhè? Naanị na Right Lens!
Layard oghere (aka The Nimrud Lens)
Ihe odide kasị ochie wuru oghere chọpụtara, nnọọ, bụ Layard Lens (aka: "The Nimrud Lens"); ọ chọtara AH Layard na 1853 na bụ na gburugburu 3000 afọ (banyere 750BC-710BC na Neo-Alaeze Ukwu Asiria nke). Ọ a hụrụ na Kalhu, na Tiglat-pileser eze obi obodo (na oge a ụbọchị, nke ahụ bụ
Nimrud na Iraq) na North West Obí. Ya chọpụtara postulated ya mee ka oge ochie etokwa iko na / ma ọ bụ na-amalite obere ọkụ. Ugbu a, ọ bụ na ngosi na British Museum; na onye na-elekọta bụ nnọọ n'aka banyere Lanyards 'ntule nke artifact, Otú ọ dị, na-eche na ọ pụrụ ịbụ nnọọ ndị e bu n'obi ka a mma. Kpachaara anya ma ọ bụ na ọ dị, ọ is a oghere, albeit incredibly crude.
Ọ bụrụ na ị nwere Latin na ụlọ akwụkwọ dị elu ma ọ bụ na mahadum, i nwere ike ugbua ghọtara na okwu "oghere" na-ewepụtara "lentil"
A otu lentil agwa (Rịba ama convex protrusion)
(Na agwa bụ a abụọ convex udi). Gris oge ochie, Roman na Ijipt odide niile okwu banyere "ọkụ iko" na "etokwa iko." Ihe mbụ e dere aha ihe (nwere) a edozi oghere bụ Eze Ukwu Nero.
Awụli elu na-atụ ihe karịrị otu puku afọ, anyị na-ahụ ọtụtụ ndị na-egosi na ochie Europe nke microscopes, telescopes, na egwuregwu. Ekwu okwu nke na nke: mere ị na-anụ banyere dọkịta n'ahụ maka onye dabara na a oghere grinder na mere a hụ ya? Ndo, nanị ihe m nwere ike ọ bụghị -ahụ a ụzọ thru isiokwu a enweghị ịkpọlite ​​na ndị agadi chestnut. Corniness afọ, anyị nwere ike ugbu a na-aga.
Ọ bụghị ruo mgbe 1733 Otú ọ dị, ọzọ ife nke breakthroughs na anya m pụtara; nke ahụ bụ mgbe Chester Moore Hall mepụtakwara na compound achromatic oghere na England. ọ
Peter Dollond si apochromat oghere (eji na telescopes)
emeghị astringently achụso isiokwu Otú ọ dị, bụ nke mere ka a yinye ihe ndị na-hụrụ na nchọpụta patented na 1758 site a dị iche iche dibịa anya kpam kpam: John Dollond. Site 1763, Peter Dollard (nwa Jọn) ama mepụtakwara ihe mma nke mepụtara na ọ na-akpọ apochromat.
The ọzọ nnukwu ihe na ìhè nke mere bụ na mmalite nke oge a na nchepụta nke ìhè; ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị, ndị dọkịta, physics, echepụta, na mathematicians ọkọdọ abuana ke nwere na ịkọ nkọ. Ọtụtụ Ichi, Thomas Young (England) & AJ Fresnel (France), na-emepe emepe na-efegharị efegharị ozizi nke ìhè. James Ọdee Maxwell (Scottish), na akpa ozizi nke ìhè na 1864, Bilie na ọrụ ya na nke mbụ na agba foto gburugburu otu oge (n'ihe dị 1860 si). Max Planck (Germany) na ya kwantum Ozizi na 1900 nyeere kọwaa ìhè; Albert Einstein (emecha United States) ke 1905 n'ihu enwekwukwa Planck kwuru nke ìhè, na-ewetara anyị na Photon.
1.5inch Dual Monopulse Gaussian Optics Lens site Dehron.com
ọganihu na kwantum arụzi kọwara ihe banyere ìhè site 1935.
Na niile nke ukwuu na-egbuke egbuke ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ìhè Ozizi, ọ dị mkpa echefula ihe ndị ọzọ na-ghar uche na-arụ ọrụ kpọmkwem anya m. Carl Friedrich Gauss, a German mgbakọ na mwepụ, nyere a ukwuu n'oge a oghere, na nghọta nke ya were. ya Dioptrische Untersuchungen kụziiri anyị ọtụtụ ihe, gụnyere aka analysis of image guzobere na Gaussian Optics.
N'ihi na ndị ọzọ 100 afọ, ọ dịkarịa ala, ọrụ ya nyeere eduzi irè oghere crafting, karịsịa nkowa nke ise isi quirks na anya m (astigmatism, Coma, distortion, Petzval ubi curvature, na * Tụkwasị).
Mgbe ndị okwu e etinyere anya m anya, ha na-eji na ubi nke Gbasara Anya, na-emekwa ihe ọ bụla na-achọ a oghere si ka na-(foto) ese foto na n'enyo anya - nke na-eweta anyị ka anyị na-anya m na-eji taa na digital video ese foto na-eji akpọsa ụgbọ ndị ọzọ ndị ọkachamara.
N'ụzọ dị mwute, Canon nwere ọtụtụ ihe na-enye ke oghere ngalaba. The CN-E14.5-60mm T2.6 L SP (na pl n'ugwu OR EF n'ugwu) na-enye enweghị atụ dịgasị n'akuku mkpuchi. Na a 4.1x mbugharị oghere na Super 35mm format, ọ na-ji nlezianya engineered nke kacha optic mmepụta. Canon routinely osobo ma ọ bụ karịa na elu-ọgwụgwụ ụlọ ọrụ ụkpụrụ. Quality na-mgbe òtù ezinụlọ na bara uru ma na Canon ngwaahịa; akara yiri mgbaaka aka ịnọgide na-enwe ezi ndị na-eguzogide ya na torque a oghere na na azụ nke Flange ihe ukpụhọde usoro osobo onye ọrụ cinematic mkpa. Nke a ikpọ 4K oghere nwere nnukwu aspherical oghere-ọcha na fluorite nke na-enyere nkọ ya ebupụtara oyiyi. N'ihi na enwekwa engineering, kwesịrị ekwesị na-elekwasị anya na-achọ naanị ntakiri mgbanwe. An iri na otu agụba ọnọdụ aperture diaphragm enyere stunningly nkọ na-elekwasị anya.
Ọzọ n'aka kụrụ maka Canon bụ CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP (na pl n'ugwu OR EF n'ugwu) - a n'elu contender na Super 35mm format na-enweghị atụ magnification na telephoto Baịbụl hiwere isi n'ebe n'ogologo. Ọtụtụ n'ime ndị bara uru atụmatụ ke Canon'S elu-ọgwụgwụ anya m ịchọta ụzọ ha n'ime ọtụtụ n'ime ha ngwa anya ngwaọrụ; ka gara aga oghere a, kwa, nwere doro anya markings na abụọ nke angled ebupụta aka ala nke iji ọbụna si na-abụghị n'akụkụ. Canon injinia na-ahịa HD na-atụ anya oké njọ. Ọnwụ onu imewe ke iko na-ewu ụgwọ mgbasa na mkpi, idozi environmentally na-akpata njehie na-akanye.
Schneider-Kreuznach Group si Cine-Xenar III (Set nke isii) oghere Set
The Schneider-Kreuznach Group si na-erubere nhọrọ nke n'elu-elu anya m bụ Cine–Xenar III (set nke isii) Prime Anya m. Ha ọma engineered imewe na-kpọmkwem ezubere iche na nke kacha mma nke eju na video ese foto. Siri ike, na kacha telecentric ngwa anya imewe, na bokeh mmetụta dị ebube na Cine–Xenar III nwere a ngwa ngwa T-akwụsị (dị ka ị ga-atụ anya na a ukwuu acclaimed akara nke anya m). Ọ bụ na-ijuanya ọnụ, n'ịtụle enwekwa àgwà.
Sony'S onyinye anyị elu-ọgwụgwụ oghere lineup bụ ihe ọzọ na ụlọ nke 6 anya m. The SCLPK6 / F CineAlta 4K Lens kit agụnye 20mm / 25mm / 35mm / 50mm / 85mm na 135mm anya m. Kwesịrị ruru eru ka ese foto na Arri pl ugwu usoro, anya m na-4K ike na zuru-metal ewu na a otu-aspherical mmewere. Tụkwasị n'ịbụ T2 dakọtara, onye ọ bụla nwere a 9-bladed iris. Nkọ ma ọ bụ nro, Sony akawanye gị ihe oyiyi nri.
Red Digital Cinema nwere a plethora nke anya m gị cinematic were. Ụfọdụ na-adịbeghị anya na-abịa egwuregwu ọrụ ndị na-tinye n'ọrụ ụfọdụ Red Anya m na-agụnye: The Hobbit trilogy, Annabelle, na-abọ ọbọ: Age of Ultron, Enders Game, Pompeii, Elysium, 300 Bilie nke Alaeze Ukwu, & nkesa: Age nke ikpochapu, na aha dị nnọọ 10 fim. Red-eme ihe ndị ọzọ n'elu oghere emepụta eme, ha na-eme ya nke ọma ka e meere a n'elu ntụpọ.
Panavision si PRIMO Prime Anya m na-a game changer; ha na-na na ọbụna jisiri meere a ole na ole Academy Awards. Nke a collection bụ top-shelf stof; ha
Panavision si PRIMO Prime Anya m
mepụta ọbụna ọkụ na kpamkpam enweghị nkebi Ịgwakọta nke ọzọ oyiyi iji PRIMO oghere. Ghosting, distortion, na veiling ntigbaa na-adị mfe quelled site PRIMO Prime Anya m; ha dị mma maka dijitalụ na film ese foto. Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo àmà site 10 ka 150 milimita na ihe ọ bụla nke ndị a anya m bụ dakọtara na 1.4x PRIMO extender, nke eliminates a full stop nke ikpughe. Na na nri PRIMO oghere na ezi ntọala, ị nwere ike na-elekwasị anya ọbụna na-erughị 2 sentimita si n'ihu nke oghere.
The PRIMO classic Series nke Panavision si Prime Anya m enye ohere mfe nhọrọ n'etiti ihe classic adụ na-elekwasị anya (na a ọnụ ọgụgụ nke mgbanwe àmà) na elu-iche arụmọrụ. Anọgide a zuru okè egwuregwu na ndị ọzọ praịm anya m na agba na ịba uru, nso-nnukwu n'ilekwasị anya bụ na o kwere omume na nri ọnọdụ; onye ọ bụla nwekwara ike ịnabata a n'azụ jel nyo (ịghasa on). Ndị a anya m mbio 21 millimeters ka 125 millimeters. Panavision si ketara iko aghụghọ (mma) amara na 21, 27, 35, 50, na 100 millimeter anya m na nke a ngwaahịa akara; niile ise na-setịpụrụ maka T1.9 ọsọ. Nha 24, 30, 65, 85, na 125 millimeter na ndị useable na T1.7 ma ọ bụ T1.8 gbapụrụ ọsọ na ike ịgbanwe site na nkọ ka adụ-elekwasị anya n'ime ogbugba. Cam mbanye usoro niile gbasaa na-elekwasị anya n'ihi na ihe niile n'ofè 3 ụkwụ nso-nnukwu n'ilekwasị anya. The 2 fọdụrụ n'ezinụlọ anya m nke kpochapụwo usoro (ntụgharị na 100 millimeter, na 125 millimeter) nwekwara ahu nagide linear amị technology.
Site Ancient Alaeze Ukwu Asiria nke na site na oge a ụbọchị, anya m nke nta nke nta e rụọ na n'inyere ụzọ nke anyị na-ahụ n'ụwa. Dị ka anyị foto teknụzụ nwere pụtara na merela agadi, anya m nwere nyeere anyị na chronicling anyị nọgidere na-emepụta dị ka a agbụrụ na esiwanye doro anya ihe oyiyi. Anya m na telescopes pụrụ iwetara anyị kpakpando si na mbara igwe, na anya m na anyị ese foto nwere ike inyere anyị eme ka anyị na kpakpando anyị na-ege ntị.
Albert Einstein ere ọkụ iko Canon igwefoto vidiyo dijitalụ Dollond anya ugogbe anya James Ọdee Maxwell Layard oghere Lens etokwa iko Max Planck Gbasara Anya Panasonic Photon Red Sony Nimrud Lens igwefoto vidiyo Young	2019-01-04
Osote: Stephen Arnold Music Delivers Sonic Branding To CNN, Sony Interactive, PBS And CGTN